« Rideaux » : maneho ny toetran’ny tompon-trano
Tianao hiova endrika kely ny efitra tsirairay ao an-tokantrano. Azo atao tsara izany, amin’ny alalan’ireo “rideaux”. Ovaina ny akora sy ny lokony. Tsara ho fantatra fa maneho ny toetran’ny tompon-trano ny lokon’ny “rideaux”.
1. Raha misy ny fahafahana dia azo atao ny manova ny lokon’ny “rideaux” arakaraky ny vanin’andro. Rehefa lohataona dia ireo lamba manify sy tsy maro loko loatra no safidiana.
2. Tsy ampitoviana ny “rideaux” ampiasaina ao amin’ny efitrano fandriana sy fandraisam-bahiny ary ny fandroana.
3. Ao amin’ny efitra fandraisam-bahiny dia ny “rideaux” misy “doublure” no tsara ampiasaina. Mora vasoka mantsy ny loko rehefa tratry ny masoandro ka hanampy amin’ny fahatezan’ilay “rideaux” ny fisian’iny “doublure” iny.
4. Safidiana arakaraka ny endriky ny varavarankely ireo “rideaux”. Raha toa ka lava be izao ilay varavarankely dia “rideaux” misy soritra mitsoridriaka mitsangana no mety. Raha kelikely kosa izany varavarankely izany dia “rideaux” misy soritra mitsoridriaka mitsivalana no safidiana.